အောက်ပိုင်း ၅ တွင်နေထိုင်ခြင်းသည်အလွန်အမင်းလျှော့တွက်ထားခြင်းဖြစ်သည် - နှုန်းထားများ
အောက်ပိုင်း ၅ တွင်နေထိုင်ခြင်းသည်အလွန်အမင်းလျှော့တွက်ထားခြင်းဖြစ်သည်
Lipscomb ခန်းမ၌ကျွန်ုပ်နေထိုင်သောလူများအားကျွန်ုပ်၏ပထမနှစ်တစ်နှစ်ကိုကျွန်ုပ်ပြောသောအခါကျွန်ုပ်ရရှိသောအသုံးအများဆုံးတုံ့ပြန်မှုမှာများသောအားဖြင့် - ဘာကြောင့်လဲ။ အောက်ပိုင်း ၅ - Hill, Mell, Lipscomb, Boggs နှင့် Church - တို့သည်မူလတန်းပထမတန်းစားများကဲ့သို့မြင့်တက်လာသလိုမဖြစ်သော်လည်း၎င်းတို့သည်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအားနည်းနေသည်မှာသေချာသည်။
စင်စစ်အားဖြင့်အောက်ပိုင်း ၅ တွင်နေထိုင်ခြင်းသည်လုံးဝတန်ဖိုးမထားရခြင်း၏အဓိကအကြောင်းအရင်းငါးခုရှိသည်။
သူတို့ဟာ Freshman 15 ကိုဂုဏ်ယူစွာပံ့ပိုးသူများဖြစ်ကြသည်
အစစ်အမှန်ဖြစ်ကြပါစို့၊ ခင်ဗျားအိပ်ဆောင်ကိုသွားချင်တိုင်းကြောက်လန့်နေတဲ့တောင် Lumpkin လမ်းကုန်းမြင့်ကိုလမ်းလျှောက်သွားရခြင်းဟာတင်ပါးနဲ့နာကျင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အနိမ့် ၅ ကိုရေးပါ။ ကျန်ကျောင်း၏ကျန်ကျောင်းများနှင့်အတူတောင်ကုန်းအောက်၌အဆင်ပြေစွာတည်ရှိပါ။
သင်သည်သင်၏ပုံကိုလျစ်လျူရှုထားပြီးဖြစ်သောကြောင့်နိမ့် ၅ သည်ဘော်လ်တန်နှင့်အိုဟပ်စ်ထမင်းစားခန်းများနှင့်အနီးဆုံးအိပ်ဆောင်များဖြစ်သောကြောင့်သရေစာအတွက်အနီးဆုံးထမင်းစားခန်းသို့အမြန်လမ်းလျှောက်နိုင်သည်။ အောက်ပိုင်း ၅ - ၁၉၆၁ မှစ၍ ပထမတန်းကျောင်းသား ၁၅ ကိုဂုဏ်ယူစွာပံ့ပိုးပေးခဲ့သည်။
(ဟေးလ် မှလွဲ၍) စားပွဲခုံမှူးမရှိပါကအောက် ၅5ည့်ခန်းများသည်သူတို့နေထိုင်သူများအတွက်လူကြိုက်များသည့်နေရာဖြစ်လာသည်၊ သာမန်ထက်ထူးကဲသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ စားပွဲခုံလက်ထောက်မရရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံးမှာ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏အတွင်းစိတ်ပျင်းရိမှုကိုထုတ်ဖေါ်ရန်အခွင့်အရေးပေးခဲ့သည်။
တစ်စုံတစ် ဦး ကိုဝင်ခွင့်ပြုရန် (သို့) ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများကိုသူတို့လာသောအခါပြောဆိုရန်အတွက်ကျွန်ုပ်သည်အောက်ထပ်တစ်လျှောက်လုံးလမ်းလျှောက်ခဲ့ရသည်။ သူတို့ကကျွန်တော့်တံခါးကိုလာပြတယ်။ အကယ်၍ ၎င်းကသင့်ကိုမအောင်မြင်လျှင်တစ်ချိန်ကကျွန်ုပ်၏အိပ်ခန်းထဲ၌ကျွန်ုပ်၏ခွေးကိုဓားဖြင့်ထိုးလိုက်သည်။ မဖြစ်နိုင်သည့်လုပ်ရပ်တစ်ခုမှာစားပွဲခုံမှူးတစ်ယောက်ရှိခဲ့သည်။
မြင့်မားသောမြင့်တက်မှုနိမ့်5သည်ပါတီပွဲမတူသောကျောင်းသားများအတွက်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်စေရန်အတွက်အားလုံးမဟုတ်ပါ။ တစ်ကြိမ်ထက်မကသောကြာနေ့ညနေ ၂ နာရီတွင်ကျွန်ုပ်သည်မှောင်မိုက်သော lob ည့်ခန်းထဲတွင်လူများစုဝေးနေသော Finding Nemo ကိုကြည့်ခြင်း (သို့) Modern Warfare ကစားခြင်းအားဖြင့်မြို့လယ်ရှိညတစ်ညတွင်ပြန်လာခဲ့သည်။
အိုး၊ ခန်းမကိုဖြတ်ပြီး Renaissance အဝတ်အစားတွေဝတ်ပြီးအားလုံးကြားနိုင်ဖို့လှေကားထစ်မှာကစားခဲ့တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုငါမေ့မထားပါနဲ့။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့နာမည်အကြီးဆုံးကတော့ငါအိမ်ထဲမှာအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်ခန္တာကိုယ်ကိုတစ်နှစ်ဝက်လောက်ဖမ်းမိခြင်းမရှိတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်အကြောင်းပြောရမယ်။ အိုး Lipscomb ခန်းမ၏နေထိုင်သူများ။
ကျနော်တို့ overzealous အားလပ်ရက်အလှဆင်ရှိသည်
သငျသညျခရစ္စမတ်၏ဝိညာဉ်သို့ဝင်ကိုချစ်သလား ကျေးဇူးတုံ့ပြန်? နွေ ဦး ၏ပထမနေ့? သို့ဆိုလျှင်အနိမ့် ၅ သည်သင့်အတွက်နေရာဖြစ်သည်။ သေးငယ်တဲ့ smaller ည့်ခံများနှင့်ဆက်ကပ်အပ်နှံနေထိုင်သူများနှင့်အတူ, အောက်ပိုင်း5အားလပ်ရက်တိုင်းအဘို့အထွက်သွားသည်။
သို့သော်အလှဆင်ရုံပျင်းစရာ, ရိုးရာခရစ္စမတ်အလင်းအိမ်ကန့်သတ်ထားကြသည်မဟုတ်။ မဟုတ်ပါ။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ခရစ်စမတ်အတွက် Lipscomb ခန်းမသည်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော၊ ကခုန်တတ်သောစက်ရုပ် Santa Claus ၏ဆောရ်ဘရိုရှိခြင်းကြောင့်ဂုဏ်ပြုခံခဲ့ရသည်။ Lipscomb ပါတီလိုပါတီမရှိဘူး။ ငါမှန်တယ်။
သင်တစ် ဦး တည်းမရှိဘဲရုတ်တရက်သင်နေထိုင်သည်အထိသင်တစ် ဦး နစ်မြုပ်၏အလှအပနှင့်အဆင်ပြေစေရန်တကယ်တန်ဖိုးထားဘူး။ အောက်ဆုံး ၅ မှာနေထိုင်ခြင်းဟာသင့်အခန်းထဲမှာနစ်မြုပ်နေခြင်းရဲ့နံပါတ်တစ်အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်တယ်လို့ငါပြောချင်ပါတယ်။ ညမှာခန်းမကိုသွားတဲ့အထိကျွန်တော့်သွားတိုက်ကိုဘယ်တော့မှဆွဲထုတ်မပစ်ဘူး။
ငါအခန်းထဲမှာရေအပြည့်အ ၀ ရတဲ့အခါ Easy Mac (သို့) လက်ဖက်ရည်သောက်ရတာလေလေပဲ။ Netflix ကိုကြည့်နေစဉ် Easy Mac ကိုဖွတ်ပြီးတဲ့နောက်အစွန်းအထင်းများကိုသန့်ရှင်းအောင်လုပ်ပါ။ အနည်းငယ်ခြေလှမ်းအနည်းငယ်ကွာရေနှင့်အတူကိတ်မုန့်တစ်ဖဲ့ကိုရခြင်း။